जातीय राज्य मागेर अशान्ति मच्चाउनेसँग हामी सहमत छैनौं :: राजकुमार लेखी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १४:३५ English
जातीय राज्य मागेर अशान्ति मच्चाउनेसँग हामी सहमत छैनौं :: राजकुमार लेखी
० तपाईंको भाषण त निकै उग्र भयो, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई फुटाउन खोज्नुभयो भन्ने प्रतिक्रिया आए नि?
–मैले आजै पनि केही साथीहरूका प्रतिक्रिया सुने। उहाँहरूले मलाई किन यस्तो बोलेको, एकजुट हुने बेलामा किन फुटाउन खोजेको भन्नुभयो। तर, वास्तविकता त्यसो होइन। मैले धेरैलाई प्रष्ट पारेको पनि छु। वास्तवमा जनजाति आन्दोलनलाई म त जुटाउन चाहन्छु। फुटाउने काम त ती मान्छेले गरेका छन्, जसले आदिवासी जनजाति महासंघलाई वाइपास गरेर यसलाई केही होइन भनेर गल्ली र चोकमा व्यक्ति व्यक्तिका नाममा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। महासंघलाई कमजोर बनाएर, महासंघमा आफू नहुने बित्तिकै वा आफ्नो स्व्ाार्थ पूरा नहुने बित्तिकै यो केही पनि होइन भनेर समानान्तर शक्ति बनाउने कुराले जनजाति आन्दोलन विभाजित भएको हो। मैले त विभाजित हुन नदिन, महासंघकै छातामुनि निश्चित एजेण्डाका साथ आन्दोलन गर्नुपर्छ भनेको हुँ।
० पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वको आन्दोलनको तपाईले किन विरोध गरेको त?
–मैले पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा हुने भनिएको आन्दोलनको विरोध पनि गरेको छैन र समर्थन पनि गरेको छैन। आन्दोलन जसले पनि गर्नसक्छ। भोलि सप्तरी सिराहामा अलग्गै समूहको आन्दोलन घोषणा हुन सक्छ। नवलपरासीमा अर्कै व्यक्तिको नेतृत्वमा घोषणा हुन सक्छ, पद्मरत्न तुलाधरको आन्दोलन पनि त्यस्तै हो। व्यक्तिगत रुपमा पद्मरत्न तुलाधर दाइप्रति मेरो सम्मान छ। तर, उहाँलाई जसरी प्रयोग गर्न खोजियो त्यसमा उहाँ सहभागी हुनु हुदैनथियो। यसरी जनजातिहरूको साझा संस्थालाई उपेक्षा गरेर अलग अलग व्यक्तिका नेतृत्वमा आन्दोलन घोषणा गर्दै जाने हो भने जनजाति आन्दोलन अघि बढ्न सक्दैन भन्ने मेरो ठम्याई हो। महासंघ नै आधिकारिक संस्था हो, जसले नेतृत्व गर्नुपर्छ।
० आदिवासी जनजाति महासंघलाई तुलाधर नेतृत्वको जनजातिहरूको राष्ट्रिय आन्दोलनमा नजान तपाईले महासंघ नेतृत्वलाई दवाव दिनुभएको कुरा आयो नि?
–यस्तो आरोप र भनाइको कुनै तुक छैन। आदिवासी जनजाति महासंघ मैले जे जे भन्यो त्यही गर्दै हिंड्ने सस्तो संस्था पनि होइन। यसका निर्णय प्रक्रिया आफ्ना खालका छन्। म निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा महासंघको राम्रो कामका लागि साथ सहयोग दिन्छु। तर, निर्णय गर्ने महासंघले हो। मेरो भनाई मात्र के हो भने जनजाति महासंघ बाहेक अरु व्यक्तिले गर्ने आन्दोलन जनजातिहरूको राष्ट्रिय आन्दोलन हुन सक्दैन। मलाई आरोप लगाउनेहरूले जे भने पनि डराउदिन। हिजो २५ वर्षदेखि आदिवासी जनजाति महासंघ जनजाति अधिकारका निम्ति लड्दै आएको संगठन हो भन्ने जगजाहेर छ। यही संस्थामा सुरेश आले, परशुराम तामाङ, पासाङ शेर्पा, ओम गुरुङ, बालकृष्ण माबुहाङहरूले नेतृत्व गरुञ्जेल महासंघमात्र ठीक हो भन्ने अनि अहिले उनीहरू निवर्तमान वा भूतपूर्व भएपछि यसलाई मान्दैनौं भन्ने सम्भ्रान्त चिन्तनको मैले बिरोध गरेको हँु। अहिले कुनै संगठनको प्रमुख वा पदमा नरहेपछि २५ वर्षको इतिहास बोकेको महासंघ विरुद्ध गल्लीगल्ली टोल टोलमा समिति बनाएर हिंड्ने अधिकार कसैलाई छैन।
० देशका सबै जनजाति अगुवाहरू मिलेर गठन गरेको संस्था कसरी गल्ली र टोलको भन्न मिल्छ र?
–उहाँहरू को को मिलेर गठन गर्नुभयो भन्ने पनि हामीलाई राम्रोसंग थाहा छ। त्यो छलफलमा आदिवासी जनजाति महासंघलाई बोलाइएको छैन। थारुहरूलाई बोलाइएको छैन, तराइका आदिवासी जनजाति समुदायलाई बोलाइएको छैन।
पहाडकै पनि अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूलाई बोलाइएको छैन। केही ठेकेदारहरू बसेर पद्मरत्नलाई मोहरा बनाउदैमा सबैले ल्याप्चे ठोक्नुपर्छ भन्ने हो भने त्यो हामीलाई कदापी स्वीकार्य छैन। पद्रमत्न तुलाधर को हो? उहाँ नेवारको अध्यक्षको हैसियतमा नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? केही चार पाँचजना जनजाति नेताहरूको महत्वाकांक्षा पूरा गर्न महासंघलाई कमजोर बनाउन पाइँदैन। ‘राजकुमार लेखी’ उनीहरूको दास होइन, कमैया होइन। थारु समुदाय र अन्य जनजाति उनीहरूका पिछलग्गु पनि होइनन्। पद्मरत्नलाई मूर्गा बनाएर कुनै आन्दोलनको घोषणा गरिन्छ भने थारु समुदाय, थारु कल्याणकारी सभा र तराईका आदिवासी जनजातिहरू उनीहरूको पछि लाग्दैनन्। संस्थागत रुपमा जानका निम्ति हामी सधैं छलफल गर्न तयार छौं। त्यसका लागि आदिवासी जनजाति महासंघ छ। अधिकारको कुरा गर्न संस्थ्ाागत रुपमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। महासंघको कुरा के हो उसले पोजिसन स्पष्ट पार्छ। तर, म भन्छु व्यक्तिलाई प्रमुख मानेर जनजाति महासंघ उनीहरूको पिछलग्गु भएर जानु हुदैन र जाँदैन।
० पद्मरत्न तुलाधरको राष्ट्रिय आन्दोलनमा जनजाति महासंघ पनि एउटा घटक हो रे नि त?
–यो कसरी हुन सक्छ? नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ यो देशका सबै आदिवासी ज्नजातिको साझा संगठन हो। केही व्यक्तिले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि बनाएका समितिमा महासंघ घटक बन्न जान सक्दैन र जानु हुदैन पनि। त्यसो भयो भने महासंघको औचित्य समाप्त हुन्छ। गल्ली र टोलमा गठन हुने व्यक्तिगत समितिहरूमा महासंघ घटक हुन सक्दैन र थारु कल्याणकारी सभा त्यसमा जाँदैन। महासंघले सबै ५९ जातीय घटकहरूको नेतृत्व गरेर आन्दोलन वा अन्य कार्यक्रम गर्नुपर्छ। महासंघ २२ दलीय मोर्चा र त्यसलाई सघाउन गठन भएका पद्मरत्नहरूको मोर्चामा जानै सक्दैन र जान हुदैन। अर्को कुरा जुन आन्दोलनमा थारु समुदायका कुनै एजेण्डा, हक अधिकारको माग समेटिएको छैन भने उनीहरूको मोर्चामा हामी त जानै सक्दैनौं। गाइघाटमा बसेको थारुको बैठकले प्रष्ट रुपमा कुनै दलको पक्ष वा विपक्षको आन्दोलनमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ। जनजाति महासंघले पनि त्यही कुरा भनिसकेको छ।
० महासंघले जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सकेन भनेर वरिष्ठ व्यक्तिको नेतृत्वमा राष्ट्रिय आन्दोलन घोषणा गरिएको हो रे त?
–हरेकले हरेकलाई वरिष्ठ देख्न सक्छ। तर, वरिष्ठता तोक्ने भनेको कामले हो। मैले पनि सुने केही जनजाति आन्दोलनका ठेकेदार हौं भन्नेहरूले महासंघ नेतृत्वले अल्पसंख्यकको प्रतिनिधित्व गर्छ, यसले हाम्रो मुद्दा बोक्दैन भनेर समानान्तर गतिविधि गरेको पनि सुनियो। यो सामन्ती चिन्तन बोकेका, राजावादी पञ्चायती मानसिकता भएकाहरूले बेला बेलामा प्रकट गरेको कुरा हो। हामी धेरै जनसंख्या रहेका आदिवासी जनजातिका नेता हौं, हामी नै राजा महाराजा हौं भन्ने चिन्तन पाँच सात जना पहाडे आदिवासी जनजाति नेताहरूमा हावी रहेको छ। हामी नै अल्पसंख्यक जनजातिहरूको ठेकेदार हौं भन्नेहरूका विरुद्ध लड्दै आएको मान्छे हँु म। त्यसैले केही पाँच सातजना पूर्व अध्यक्ष वा महासचिवहरूको सम्भ्रान्त सोचसंग हामी सहमत छैनौं। लामो समयसम्म जनजाति महासंघलाई छ सात ओटा धेरै जनसंख्या भएका राई, मगर, गुरुङ, तामाङ, लिम्बुहरूले तार बारेर बसेका थिए। उनीहरूको ठेकेदारी खोसिन लाग्यो भनेर अहिले विक्षिप्त भएर टोल टोल र गल्लीगल्लीमा मोर्चा बनाउदै हिंडेका छन्। त्यसमा आदिवासी जनजातिहरू पछि लाग्नु हुदैन। जनजाति महासंघले आफ्नै कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्छ। सबै आदिवासी जनजातिका मुद्दा समेटेर अघि बढ्नुपर्छ। कसैको पिछलग्गु बन्ने कुरा हुदैन।
० महासंघ नेतृत्व र पद्मरत्न समितिबीच सहमति भएको कुरा आयो नि?
–आदिवासी जनजातिका मुद्दा र पहिचानको मुद्दामा सबै व्यक्ति वा समूहसंग महासंघ छलफलका लागि सदैव तयार छ। मुद्दा मिल्नेसंग सहकार्य गरेर पनि जानुपर्छ। त्यही सन्दर्भमा केही कुरा भएको होला। त्यसलाई अन्यथा लिन सकिदैन। तर, जहाँसम्म आन्दोलनको कुरा छ, त्यो आन्दोलन महासंघको नेतृत्वमा मात्र सम्भव छ। नत्र थारुले अलग्गै आन्दोलन गर्छन्। अहिले पद्मरत्न नेतृत्वको आन्दोलनमा महासंघको कुनै भूमिका छैन। हामी कसैसंग सल्लाह छलफल भएको छैन। तराईका आदिवासी जनजाति र पहाडका पनि अल्पसंख्यक सिमान्तकृत समुदायका मुद्दा समेटिएका छैनन्। कुनै पदमा नभएका स्वार्थी र महत्वकांक्षी व्यक्तिहरूले आन्दोलनमा हावी हुन र जनजाति आन्दोलनलाई विभाजित गर्न पद्मरत्न तुलाधरलाई मोहरा मात्र बनाएका हुन्। जनजाति आन्दोलनको नेतृत्व जनजाति महासंघले मात्र गर्न सक्छ। आङकाजी शेर्पा जस्ता मान्छेहरूले चाहेर मात्र हुदैन। म महासंघको निवर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा जनजाति महासंघलाई बलियो बनाउन जुनसुकै योगदान गर्न तयार छु।
० महासंघलाई बाइपास गरियो भन्नेमा मात्र आपत्ति हो कि पद्मरत्न समितिको मुद्दा र एजेण्डामै विमति हो?
–पद्मरत्न समितिले अघि सारेका मुद्दामै हाम्रो विमति छ। पहिलो कुरा त उहाँहरू केही मुठिभर पाँच सात जना पहाडे जनजाति नेताहरूले बिगत आठ दश वर्षदेखि जातीय राज्य माग्दै आउनुभएको छ। मैले महासंघको अध्यक्ष भएकै बेला प्रष्ट भनें, हामी जातीय राज्य माग्दैनौं/ मान्दैनौं। हामी संघीय समावेशी राज्य माग्छौं। संघीय समावेशी राज्य र जातीय राज्यमा आकाश जमिनको फरक छ। जातीय राज्य मागेर अशान्ति मच्चाउने, जनजाति आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्ने काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ।
० पद्मरत्न समितिको आन्दोलनमा नजाने खास कारण खुलाई दिनुस् के हो?
–प्रष्ट कुरा प्रचण्ड नेतृत्वको कुनै पनि मोर्चालाई हाम्रो सहमति र समर्थन हुदैन। प्रचण्ड बाबुराम प्रधानमन्त्री भएकै बेला, प्रचण्डको पार्टी तत्कालीन संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकै बेला तराई थरुहटलाई जबर्जस्ती मधेशमा थोपर्ने उनीहरूनै हुन्। अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाको गोटी बन्न हामी कसरी जान्छौं। जनजाति महासंघ कुनै दलको विरुद्ध वा समर्थनमा जान सक्दैन। थारुलाई जबर्जस्ती मधेशी बनाउने निर्णयको पहाडका पाँच सात जना मठाधीश जनजाति नेताहरूले विरोध गरेका छैनन्। यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ उनीहरूको नियत।
० तपाइले यसो भनिरहँदा थारु समुदायले मान्छन् त?
–थारु कल्याणकारी सभाको बैठकको निर्णय अनुसार मैले बोल्दैछु। थारुका अध्यक्ष धनीराम चौधरीले विभिन्न मिडियामा भनिसक्नुभएको छ। हामी कुनै २२ दलीय मोर्चाको गोटी बन्न चाहँदैनौं भनेर। तराईका आदिवासी जनजाति भूमिपुत्रको माग नबुझ्ने र नसमेट्ने कथित पद्मरत्न समितिसंग हाम्रो कसरी सहमति हुन सक्छ? जुन प्रचण्ड बाबुरामले हामीलाई जबर्जस्ती मधेशी घोषणा गरे, उनीहरूकै पिछलग्गु बनेर हामी जान सक्दैनौं। जनजाति महासंघको नेतृत्वमा हामी जान्छौं। नत्र तराई थरुहटमा थारु समुदायको अलग्गै आन्दोलन हुन्छ।
० अलग्गै आन्दोलन भन्नु भयो, त्यो आन्दोलनमा कुन कुन समुदायलाई समेट्न बाँकी छ र?
–झाँगड, राजवंशी, उराव धिमाल लगायत आदिवासीहरूको अलग्गै आन्दोलन हुन्छ। हामी गल्लीका संस्थाहरूलाई नेता मान्न जाँदैनौं। तपाईलाई थाहा होला, तराई थरुहट भूमिलाई अन्त लैजान पाइँदैन भनेर अहिले सबै पार्टीका थारु सभासद एकजुट भएर विज्ञप्ति निकालिसकेका छन्। हामीसंग ४१ जना थारु सभासदको बल छ। उनीहरू संविधानसभाभित्र लड्छन्, हामी बाहिर लड्छौं। हाम्रो लडाई कुनै दलको समर्थन वा विरोधमा होइन अधिकारका लागि हो। हामी जातीय राज्यका विरोधी हौं।( स्रोत: साँघु)
१४ मंसिर २०७१, आईतवार १०:५१ मा प्रकाशित